Umqondo ozwakalayo noSara Glaser, i-CAS | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » Umqondo ozwakalayo noSara Glaser, i-CAS
Umqondo ozwakalayo noSara Glaser, i-CAS
Yize izinombolo zisezingeni eliphakeme kakhulu, kusenzakalelayo ukuthola "abesifazane ngokulalelwayo," ikakhulukazi okuvelele njengeSara Glaser, CAS. Ngemuva kokuqalisa umsebenzi wakhe embonini yasekolishi njengonjiniyela wokuqopha eminyakeni ecishe ibe ngu-20 edlule, impumelelo enkulu kaGlaser ingatholakala emsebenzini wakhe njengesixhumi sokukhiqiza umsindo wezingoma zamafilimu nethelevishini ye-episodic. Amanye amakhredithi akhe wakamuva afaka Westworld, I-Anatomy Grey, U-Feud: UBette noJoan nefilimu yesici yeNetflix, I-Rim yezwe.
Wabelana ngokuningi ngomsebenzi wakhe wokulalelwayo, nokuthi kunjani ukuba ngowesifazane embonini, kwi-Q & A yakamuva ye-DPA “Sound Insight” Q&A.
Q: Ungene kanjani ebhizinisini lokuhlanganisa umsindo?
A: Noma ngikhulele ngaphakathi e-Los Angeles, Angikhulelwanga kwezokuzijabulisa njengabaningi engisebenza nabo. Ngithole ukuqoshwa komculo lapho ngiya ekolishi. Kwakuyizinsuku zokuqala ze-intanethi, futhi ngaphetha kumabhodi emiyalezo athile wesitudiyo nezimo zokuqoshwa bukhoma, ngasheshe ngaboshwa. Ngangihlala lapho amahora amaningi, ngiphatha izindaba ezimayelana nalaba bafana ababenjiniyela kuzo zonke lezi ziteshi zokuqopha kuma-70s, futhi ngiyakhumbula ngicabanga ukuthi kumele ukuba kwakumangalisa kanjani lokho.
Ekugcineni, umngani wami wanginikeza ikhathalogu ye-UCLA, lapho ngaya khona ngathola izitifiketi kuRecurity Engineering, Songwriting neBusic Business. Ngiye ekilasini lami lokuqala lokuqopha e-Oceanway Studios futhi, lapho ngithinte ifader, ngokushesha ngathandana. Ngemuva kwenyanga, ngathola umsebenzi wami wokuqala studio sokuqopha — futhi akulula njengoba kuzwakala ngoba, ngo-1998, abesifazane bebengaqashwa ukuba babe onjiniyela.
Ngenkathi ngifuna umsebenzi, omunye uzakwethu wangitshela ukuthi ngithumele umsebenzi wami kuBill Dooley — ngabizelwa inhlolokhono futhi ngaqala uhambo lwami lokuqopha. Kusukela ngosuku lokuqala, wangiphatha njengonjiniyela — wangifundisa futhi wangifundisa indlela yokuxazulula inkinga. Ngisasebenzisa amasu angifundiswa uBill, nsuku zonke.
Ngemuva kwalokho, ngazungeza ngaya kwamanye ama-studio okuqopha ambalwa. Ngemuva kwalokho, amaPro Tools aphuma futhi ayiguqula ngokuphelele imboni. Izitudiyo eziningi zavalwa, futhi yayincane imisebenzi etholakalayo. Ngakho-ke, ngaleso sikhathi, nginqume ukumanzisa izinyawo zami emhlabeni ngemuva kokukhiqizwa. Ngaqala njengomhleli womsindo wokubuyisela ngaphambi kokugcina ngishintshele kumsindo wokukhiqiza ngasekupheleni kuka-2003; futhi ngilapha kusukela lapho. Kungumgwaqo osangene, kepha ubesabeka futhi kube nabantu abaningi abahle engisebenze nabo kule minyaka edlule. Angazi ukuthi yini enye engingayenza - kimi, ayikho into ethokozisayo nejabulisayo njengokusebenza ngomsindo.
Q: Yiziphi izinselelo eziza nokuthola kowesifazane ngokulalelwayo?
IMP: Njengowesifazane embonini yabesilisa ikakhulukazi, kuye kwadingeka nginqobe izithiyo abaningi engisebenza nabo abangazange bazenze. Emuva lapho ngangise-UCLA futhi ngifaka isicelo sokuqopha imisebenzi yesitudiyo e-LA okokuqala ngqa, ontanga yami babengitshela ukuthi ngingazihluphi ngama-studio athile njengoba beqasha abesifazane kuphela njengabamukela. Kuyo yonke le minyaka, ngifunde ukukhulisa isikhumba esijiyile, nokugcina umqondo ovulekile. Lokho kusho, kuyamangalisa ukubona amaqembu eqhamuka ngaphakathi komkhakha okhuthaza ukwehluka phakathi kontanga yethu.
Q: Yisiphi iseluleko ongasinikeza abanye besifazane abanesifiso sokufunda ngokuzwakalayo?
A: Kunobuntu obuningi obukhulu kulo mkhakha futhi awusoze wathatha noma yini uqobo. Yiba nabantu abahle ngoba yilokho abazokuqaphela, kepha uhlale ukhumbula ukuthi kumayelana nomsebenzi kuqala. Umuntu ose-PA on-set namhlanje kungenzeka abe sehhovisi lokukhiqiza aqashe wena kusasa, ngakho-ke ufuna bazi ukuthi usebenza kanzima futhi ungumdlali weqembu. Njalo yenza konke okusemandleni akho, abantu bazokhumbula lapho ufaka umzamo.
Imboni yezwi yomphakathi ngumphakathi onamathele kakhulu; siyathanda ukululekana. Nginabangani kuyo yonke i-LA futhi sihlala sibheke omunye komunye, noma ngabe ukuhleba umbono noma ukwabelana ngamasu amasha. Ngakho-ke, ungalokothi wesabe ukufinyelela futhi ukubuza imibuzo. Futhi, ikakhulukazi kwabesifazane, hloniphani labo abeza ngaphambi kwenu futhi balwa impi ukuze ube lapha.
Okokugcina, khumbula ukuthi ungumfundi ohlala njalo uma ukulemboni yezomsindo. Umzuzu onawo wokuthi uphuma esikoleni, usuqedile ukukhula njengochwepheshe. Njengabaxube bemisindo, ikakhulukazi njengoba ubuchwepheshe buqhubeka phambili, sikhula njalo futhi siqhamuka nezindlela ezintsha zokwenza izinto. Yilapho ukuba nomqondo ovulekile kuzokusebenzela kahle.
Q: Ungasitshela ngesipiliyoni sakho sokuqala ngama-DPA Microphones?
A: Kusukela okokuqala ngathola izandla zami kumakhomponi e-DPA ngo-2013, ngaboshwa. Ngiyakhumbula ngafika kusethi lapho ngangizokwanda khona. Ngaphandle kokubhekisisa ama-mics, ngaqala isheke lami lomsindo futhi ngokushesha ngiwubona umehluko. Angikholwanga ukuthi licace kangakanani futhi licacile kangakanani izinga lomsindo — ligcwele futhi lihle kakhulu. Ekugcineni, ngangisebenzisa i-DPA's 4017 Shotgun Mic. Kusukela ngalowomzuzu, ngangazi ukuthi leyo kuzoba yisisombululo sami sokukhetha sama-booms — ikhwalithi yomsindo nje ayinakushaywa. Ngenkathi ngisebenza kulo mbukiso, ngithole nethuba lokuthola izandla zami ku-brand 4061/71 Miniature Omnidirectional mics. Babezwakala begcwele futhi bemvelo. Kwakukuhle impela — futhi yingaleso sikhathi lapho lapho ngathandana ne-Mica Microphones ye-DPA. Ukusuka lapho, ngaqala ukuhlanganyela uthando lwami lomkhiqizo nabanye abaxube umsindo, neqembu labanye engisebenza nabo lagxumela kwi-DPA bandwagon. Ngihlala ngihamba nge-DPAs yami.
Q: Yikuphi ukusebenzisa ama-DPA mics, futhi yiziphi ezinye zezici noma imisebenzi eye yaba yusizo?
A: Kule minyaka eyisikhombisa edlule, ngithole i-arsenal yezisombululo ze-DPA. Lokhu kufaka phakathi i-4017 Shotgun, 4061/71 Miniature Omnidirectional kanye ne-4098 Supercardioid Microphones. Ngiphendukela kulezi zonke izidingo zami zokuqoshwa zomsindo kuzinhlelo ze-TV nezamafilimu. Uma ngisebenzisa ama-mics ezitshalo e-DPA, ngiyazi ukuthi ngingavele ngiwaxhume ngiwafihle, futhi azohlala ethwebula umsindo ocacile ngenkathi kungabonakali kukhamera. Kwesinye isikhathi, imibhobho encane ayizwakali imvelo kakhulu ngenxa yobukhulu obuncishisiwe be-diaphragm, kepha ngandlela-thile abenzi bokuqonda e-DPA bathole ukuthi bangawenza kanjani lomsebenzi. Futhi, ama-lavaliers angama-4061 kanye nama-4071 amangalisa ngokumangazayo — lezo mics ezincane ziphatha ipiki elikhulu!
Ikhwalithi yokwakha ye-DPA Microphones ', ehlanganiswe nephalethi yayo ye-sonic, inginikeze ikhambi elilungile lemibhobho yazo zonke izidingo zami zokuqoshwa. Njengokupenda kumdwebi, ama-mics ayikho konke kumxube wokuzwakalayo, futhi ngidinga izixazululo engingathembela kuzo. Imvamisa ngisebenza ezimeni ezinzima - lezo ongeke ufune ukwethula kuzo imakrofoni yakho. Nge-DPA, ngiyazi ukuthi ama-mics azosinda noma ngabe ngisebenza yiphi imvelo; futhi zizokhala zizwakala zimnandi sonke isikhathi.
Ngaphezu kwalokho, amafilimu adutshulwa ngezindlela eziyikhulu — isibhamu, izilungiselelo, izindawo — bese wonke lowo msindo uya ekukhiqizeni kwangemuva ukuze uhlanganiswe ndawonye. Nge-DPA, ngingenza umsebenzi weqembu leposi kube lula ngoba imakrofoni yami iyafana kahle. Ngale ndlela, lapho eshintshashintsha phakathi kwamathrekhi we-lav namathrekhi we-boom, akuphumi kuwe; kuzwakala kungenamthungo. Ukuvumelana kwe-sonic phakathi kwamakhrofoni e-DPA kuyahlaba umxhwele kakhulu-awukwazi ukuzwa umehluko kusuka kwesinye isicoco kuya kwesinye. Lokho kubaluleke kakhulu kimi njengoba ngijwayele ukusebenza nama-mics amaningi ngasikhathi sinye. Ngokwami, ngihlala ngithola i-DPA ukuba intokozo ukuxubana. Ukusebenza nomkhiqizo njalo kubeka ukumamatheka ebusweni bami.
Q: Njengomuntu othanda imakhrofoni ye-DPA, izixazululo zomkhiqizo zikukhulisa kanjani ukuhanjiswa komsebenzi kwakho uma usendaweni?
A: Abaqondisi bazokuza nombono wokuthi bafuna ukwenza kanjani okuthile - njengesixhumi somsindo, kufanele ukwenze kusebenza. Ukufeza lokhu, ngidinga imakrofoni ezwakala kamnandi, ingavimbeli umlingisi futhi ingabonakali kukhamera. Ngakuthola konke lokho nge-DPA Microphones. Ngibe nokuhlangenwe nakho okuhle ngalo mkhiqizo, futhi ngayo yonke imishanguzo ye-DPA engikwazile ukubeka izandla zami, bavele bangqongqise epaki ngaso sonke isikhathi. Akukho okusondele kwi-DPA emhlabeni wami. Ngiyakwazi ukuthola konke engikudingayo ngithola impendulo egcwele ubuso nobuso bemvelo. Ngibheke phambili ngokuqhubeka nokuncika kwizisombululo ze-DPA kumaphrojekthi esizayo.
Ama-Microphones e-DPA Ama-lavaliers USara Glaser 2020-07-29
Ngaphambilini: Imikhiqizo ye-Studio Technologies Manje Isitholakala NgoMarkertek noTecNec
Olandelayo: I-Broadcast Pix Imemezela u-0% Ukuxhaswa ngezimali kumasystems we-StreamingPix